प्रम ओलीमाथि देउवाको व्यङ्ग्य : आफ्नै मन्त्रीको विश्वास नगर्नेले कसरी देश चलाउन सक्छ ? – Khabar Silo
काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको कार्यान्वयन पक्ष चिन्ताजनक रहेको बताएका छन् ।गणेशमान सिंह तथा जनआन्दोलनका शहिद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानद्वारा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले संविधानको स्प्रिटअनुसार त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको बताएका हुन् ।
उनले भने, ‘नेपालको संविधान बहुलवादमा आधारित संविधान हो । जसमा महिला, दलित, मधेशी, आदिवासी जनजातीहरुको अधिकार सुरक्षित गरिएको छ । संविधानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भने कार्यान्वयन पक्ष हो । तर कार्यान्वयन पक्ष चिन्ताजनक छ ।’
सरकार लोकतन्त्रको मूल्यमान्यको विरुद्धमा उत्रिएको सभापति देउवाको आरोप थियो । उनले भने, ‘सरकार संविधानको स्प्रिटविपरीत जनताको मौलिक अधिकारमाथि अंकुश लगाउँदै छ । काँग्रेस त्यसको खिलाफमा उत्रिन्छ । प्रजातन्त्रमा हामीले कुनै सम्झौता गर्नै सक्दैनौँ ।’
सभापति देउवाले प्रधानमन्त्रीले आफ्ना मन्त्रीमाथि पनि विश्वास नगरेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई आफ्ना मन्त्रीमाथि विश्वास छैन । यस्ताले देश चलाउन सक्छ ?’ उनको प्रश्न थियो ।सरकारले प्रहरी र प्रशासनलाई पार्टीकरण गरेको सभापति देउवाको आरोप थियो । उनले, ‘प्रहरी प्रशासन जनताले तिरेको करबाट सञ्चालन भइरहेको छ । प्रहरी र कर्मचारीलाई पार्टीका कार्यकर्ता बनाउन पाइन्छ ? यस्तो कुरा हामीलाई मान्य हुँदैन ।’